Alona ao anaty rano aloha ny ravina gélatine mba halemy. Aorian’izay dia alaina ny krema sy ny ravim-boanio ary ny siramamy dia ampangotrahina. Esorina eo ambony fatana dia arotsaka miaraka amin’ireo ny ravina gélatine, ny dité sy ilay fangaro krema sy tavim-boanio teo aloha. Avela ho matimaty vao arotsaka ao anaty vera. Ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny ora 4. Rehefa tena handroso azy dia hametrahana voarohy eo amboniny sy ilay voanio voakiky dia aroso.
Voasarimakirana 7 – ravina solila fehiny 1 – siramamy mena 6 sf – rano misy entona mangatsiaka tsara 30sl - tavim-boanio 30sl
Diovina aloha ireo voasarimakirana. Hanajanonana didiny 6 dia potserina ny ambiny ahazoana ny ranony. Zaraina ao anaty vera miisa enina io ranom-boasarimakirana io dia araraka koa ny siramamy. Arotsaka ny tavim-boanio dia afangaro. Alefa ihany koa ilay rano misy entona. Hanaingoana azy ireo voasarimakirana efa notetehina boribory ambiny.